Isithunzi Almanzor - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMerche
Ifanelekile ebusika xa kunekhephu. Ungasebenzisa isileyi esinaso ekhaya, kunye nemidlalo yebhodi ukuze wabelane nosapho. Ehlotyeni kukwayinto entle kuyo yonke imisebenzi enokwenziwa kule ndawo: ukukhwela ihashe, iindlela zokuhamba intaba, ukuhlamba kumachibi endalo okanye ukuvuka kade kwaye uphume ngeengcongolo.
Ilungile ebusika xa kukhithika Ungasebenzisa isileyi esinaso ekhaya, kunye nemidlalo yebhodi oza kwabelana ngayo nosapho.
Zonke iindwendwe ziya kuba nesipho esamkelekileyo.
Ngalo lonke ixesha ndiya kufumaneka kubathengi ngayo nayiphi na imfuno enokuthi ivele.
Inombolo yomthetho: Vut-AV-416
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barajas